Ogaden News Agency (ONA) – Norway: Xuska Sanad-guurada Africa oo loo diiday Qunsulka Itoobiya, laguna Marti qaaday Jaaliyadda Ogaadeenya!
Posted by ONA Admin	/ May 25, 2013
Oslo: Waxaa caawa fiidkii caasimadda Norway lagu qabtay xaflad lagu xusayay sanad-guuradii 50-aad ee kasoo wareegtay, goortii la aas-aasay Ururka isku-tagga Africa ee dhawaanta loo bixiyey ”Midowga Africa”.
Kullanka oo ay kasoo qayb galeen Safiirada Africa u jooga Norway, Diplomaasiyiin & marti sharaf kale ayaa taariikhda markii koobaad lagu marti qaaday inay ”Xubin goob joog ”, ka noqdaan kulanka maanta Gudoomiyaha Jaaliyadda Soomaalida Ogaadeenya ee dalka Norway, Xaaji Abdullaahi & xubno kale oo wehlinayey.
Gudoomiyaha Jaaliyadda ayaa uga mahadceliyey safiirada Afrika iyo marti sharafta kale ee kasoo qeyb gashay munaasabadda, isaga oo sheegay inay jiraan wadamo ay kamid tahay Ogaadeenya oo wali la gumeysto, una baahan in dhamaan loo gurmado dadkaas muddada badan ku hoos jira cadaadiska & cabudhinta Itoobiya. (Hoos Ka Daawo Wareysiga)
”Uma aanaan imanin inaan dabaal dagno, waxan se u nimid inaan cadeyno in sanad-guuradani kala dhiman tahay, walina ay jiraan Wadamo Afrikaan ah oo la gumeysto, Ogaadeenya na kamid tahay”, ayuu yiri Gudoomiyaha oo sheegay Afrika inay ku guul darraysatay 50-kii sano ee lasoo dhaafay xal u helidda qadiyaddan.
Safiiradda dalka South Africa u fadhida dalka Norway, Ms. Queen Anne Zondo ayaa carrabaabtay dhibaatooyinka kajira dhulka Ogaadeenya ay lamid yihiin falalkii midab takoorka ahaa ee kajiray dalkeeda, waxayna intaa raacisay inay tahay wax laga xumaado in wadan Afrikaan ah gumeysto oo adoonsado dal kale oo Afrikaan ah.
Jawiga shirka ayaa isu badalay mid murugo ah, iyadoo dhamaan saxaafadii goobta timid ay wareysiyo la yeesheen Gudoomiyaha Jaaliyadda Ogaadenya, waxaana goobta ka maqnaa Safiirka Gumeysiga Itoobiya u fadhida Sweden & qunsulka u fadhiya Oslo, middan oo muujinaysay in gumeysiga lagaga adkaaday goobaha Diplomaasiyadeed ee caalamka.
Sidoo kale, TV caan ah oo laga leeyahay dalka South Africa ayaa wareysi dheer la yeeshay Gudoomiyaha Xaaji Abdullaahi & Mudane Axmed oo kamid ahaa xubnihii lagu marti qaaday inay ka hadlaan shirka.
Isku soo wada duuboo, Jaaliyadda Soomaaliyeed Ogaadeenya ayaa muujisay bilooyinkii la soo dhaafay dadaalo diplomaasiyadeed, fashilinta qorshayaasha Itoobiya ka damacsan tahay qurbaha & kasbashadda dadka Jecel Xoriyada iyo Cadaaladda ee ku dhaqan dalka Norway.